Fatapera Antaninarenina: hizara kanto ny Rohy Mozika | NewsMada
Fatapera Antaninarenina: hizara kanto ny Rohy Mozika
Andro vitsivitsy izay, maro ireo nahatsikaritra, nihaino, nankafy ary nizara ilay rakitsarin’i Gtika. Namerina ireo hira rap malagasy nanana ny lazany, tamin’ny fanaovany azy ity tovovavy ity, ka nanintona ny maro izany. Fantatra fa ampahany amin’ny vokatra hatolotry ny Rohy Mozika an-tsehatra, anio manomboka amin’ny 7 ora sy sasany alina, etsy amin’ny Fatapera Antaninarenina io.
Tsy hamerina hiran’olon-kafa ihany, fa hitondra ireo vokatra noketrehiny ihany koa ny Rohy Mozika, mandritra ny fotoana iarahany amin’ireo mpankafy mozika.
Anisan’ireo andry sy miantoka ny feo ao amin’ny Rohy Mozika mantsy i Gtika. Monina any Frantsa fa mandalo eto Madagasikara izy amin’izao fotoana izao, hizara ny talentany. Mirona kokoa amin’ny jazz sy ny soul-funk izy, ary manam-pahaizana manokana amin’izany, no ao anatin’ny tarika maromaro any Frantsa rahateo.
Hanampy azy eo amin’ny feo koa i Rojo, izay mirona ihany koa amin’ny jazz. Tsy zoviana amin’ireo mpanaraka ny fivoaran’ny mozika tato ho ato kosa ireo mpitendry, toa an-dry Bolo eo amin’ny amponga maroanaka, Tsanta eo amin’ny vata maroafitsoka, Kevin hisahana ny zavamaneno tsofina, Anjara eo amin’ny gitara ary i Fetra eo amin’ny gitara beso. Tsara arahina akaiky…